Mayelana Nathi - ZHANGZHOU GENGWEI TRADING CO., LTD
Imikhiqizo Eqandisiwe Yofulawa
Ukudla Kwasolwandle Okuqandisiwe
Imifino Eqandisiwe Nezithelo
ZHANGZHOU GENGWEI TRADING CO., LTDyibhizinisi elizimele kuphela, sigxile ebhizinisini lokungenisa nokuthekelisa, manje ibhizinisi elikhulu lithumela ukudla okusemathinini, ukudla okomisiwe nokusha, ukudla okufakwe emanzini anosawoti, izithelo nemifino eqandisiwe, imikhiqizo yasemanzini efriziwe namaswidi njll.
Inkampani yethu itholakala ethafeni elivundile laseZhangzhou, maphakathi nedolobha laseZhangzhou, eliseduze neXiamen.Ithrafikhi elula, indlela esheshayo, i-Xiamen-Zhangzhou city Avenue, ujantshi wesitimela onesivinini esiphezulu udabula lonke idolobha lase-zhangzhou.Ihhotela lezinkanyezi ezinhlanu i-Crowne Plaza Hotel and Business Center kanye ne-Zhangzhou Administrative Services Centre ebhekene nehhovisi, okuyindawo eyimizuzu engama-40 kuphela ukusuka esikhumulweni sezindiza i-Xiamen International.
Sinempahla yethu engashintshi, futhi sakha izizinda zethu zokukhiqiza kanye nozakwethu wokubambisana, okuhlanganisa noyedwa osevele uphasise igunya le-JAS nguhulumeni wase-Japan.futhi yaphasisa isitifiketi sikahulumeni waseShayina sesizinda sokukhiqiza iPentshisi.
Imikhiqizo yethu edayiselwa eJapane, eYurophu, e-USA, eCanada, eRussia naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia njll.
Inkampani ibilokhu igxile kwifilosofi yebhizinisi "yekhwalithi yokuqala, esekelwe kubuqotho, egxile kusevisi" ukuze idinge abasebenzi ukuthi banamathele kumgomo "wekhwalithi kuqala" ukuze baqhubeke bethuthukisa uhlelo lwesevisi.thuthukisa ikhwalithi yesevisi.Siyaqiniseka ukuthi bonke ozakwethu emizamweni eqhubekayo yokuhlola yenkampani kanye nokwesekwa nina makhasimende, inkampani izohlinzeka iningi labathengisi ukuhlinzeka ngemikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu, Isevisi engcono kakhulu nephelele.
Umphathi wethu nazo zonke izisebenzi zinolwazi olucebile kokubili kwebhizinisi lokudla kanye nebhizinisi lamazwe ngamazwe ngaphezu kweminyaka eyishumi, sijwayele i-HACCP, IFS, BRC, iqondisa ngokuqinile inqubo yokukhiqiza, futhi inohlelo lokulawula ikhwalithi yemikhiqizo ngokuqinile.
1. Ama-dessert afriziwe: imiqulu yemifino eqandisiwe yasentwasahlobo, amabhola embewu eqandisiwe, i-curry angle eqandisiwe nokunye;
2. Izithelo ezisemathinini: ama-lychees kusiraphu, ama-longan isiraphu, uphayinaphu kusiraphu, i-pear in isiraphu, i-peach ephuzi isiraphu njalonjalo;
3. Imifino esemathinini: amahlumela e-bamboo, amakhowe, amakhowe afakwe emanzini, uphizi oluhlaza, ubhontshisi obuluhlaza, ummbila omnandi, amakhowe otshani, i-artichoke nokunye;
4.Imifino nezithelo eziqandisiwe: amahlumela e-bamboo eqandisiwe, amakhowe, ubhontshisi obuluhlaza, i-broccoli eluhlaza njalonjalo;
5.Imikhiqizo Yasemanzini: Umsila wemfanzi oyiqhwa, inyama yenkalankala eqandisiwe, inhlanzi nokunye ukudla kwasolwandle;
6.Imikhiqizo eyomile nemisha: i-mushroom shiitake, isikhunta esimnyama, i-mandarin orange, i-grapefruit njalonjalo;
© Copyright 20102021: Wonke Amalungelo Agodliwe.